Iincwadi ezi-5 zokuqalisa isikolo kakuhle (okanye kakuhle) | Uncwadi lwangoku
Ekuqaleni kukaSeptemba. Lixesha lokuba sibuyele esikolweni. Andizange ndiyithande, kodwa into enomdla kukuba abatshana bam abancinci bayayilindela. Izinto ezenzekayo. Into ekufuneka uqhubeke uyenza, ngaphandle okanye esikolweni, kukufunda. Kwaye kutheni ungenzi kuye? Zezi Izihloko ezi-5 zoncwadi lwabantwana nolutsha (ngoku nangonaphakade) Kunye nokuthinta abantu abadala- ukwenza ukubuya kube nokunyamezeleka.
1 Esona sikolo sinqabileyo emhlabeni - uPablo Aranda
2 Ii-Anecdotes ezivela kootitshala-uCarlos G. Costoya
3 Ikati esikolweni - uJ. Patrick Lewis
4 ISanta Clara kunye neMalory Towers-zonke iikhosi-uEnid Blyton
Esona sikolo sinqabileyo emhlabeni - Pablo Aranda
Yenzelwe abafundi ukusuka kwiminyaka engama-8, le ncwadi isixelela ngayo Isikolo sikaFede, Isikolo esinqabileyo ehlabathini. Ithiyiwe TVIsikolo seTekhnoloji yeeLwimi zangaphandle. Yintoni eyenza ikhetheke kukuba xa umntwana ehamba, uhamba nomzali wokuqala ofikileyo, kwaye kufuneka amphathe njengomntwana wakhe ndibuye nayo esikolweni ngengomso. Ke umdla uyanikwa. U-Esther Gomez Madrid beka imifanekiso.
Iingxelo zootitshala -Carlos G. Costoya
Zimbini iincwadi kwincwadi enye. Inkqubo ye- icandelo lokuqala Yiyo Ukukhetha amava ootitshala babo kumaziko ahlukeneyo apho bahlalutya khona imeko yomsebenzi wabo kunye nemfundo ngokubanzi kwilizwe lethu. Ubungqina kuzo zonke izihloko ezishushu ezivela kubundlobongela besikolo ukuya kugonyamelo, ukusuka kwigunya ukuya kwelinye ilizwe kumagumbi okufundela okanye ukusilela kwesikolo ukuya kubizo lukatitshala.
La Inxalenye yesibini intsha i-anthology yobubhanxa ngee-anecdotes eqokelelwa ngootitshala baseprayimari nabasesekondari kwizikolo zabucala nezikarhulumente. Kwaye oko kubeka ithoni yokuhlekisa kunye nokutyhila ukuba ibala lokudlala lifundisa njani.
Ikati esikolweni -UPatrick Lewis
Con imizekeliso ebhalwe nguAilie Busby, le ncwadi libali labantwana ukusuka kwiminyaka engama-3Oko kukuthi, abo bangakwaziyo ukufunda okanye baqala ukuqala. Ngoku kunjalo ibhalwe kwivesi kwaye ifundwe ngokuvakalayo, ngokuchanekileyo ukuze isingqisho sinceda umntwana ukuba azinkqaye.
Ubalisa ibali lika ikati elahliweyo efunyanwa ngumgcini wesikolo ogqiba kwelokuba ayise kwigumbi lokufundela ngovuyo olulandelayo lwabo bonke abantwana. Eli nenekazi liselula lithatha ithuba lokubaxelela ngobomi balo nangamasiko alo. Kwaye ikati, ivuya, iya kuthatha isigqibo sokuhlala apho.
ISanta Clara kunye neMalory Towers Zonke iikhosi-Enid Blyton
Kwaye ungazichazi njani ezi Iiklasikhi ezimbini ngokugqwesa ukusuka kumbhali wolutsha ongacacanga onguBritish Enid Blyton. Ezinye zeenkumbulo zam zesikolo ezimnandi zinxulunyaniswa nelayibrari yesikolo sam apho, ngolwesiHlanu emva kwemini, bendiya kuhamba nezihloko zakhe ezazikhona. Ewe, ndandibathanda kakhulu Abahlanukodwa ubuthathaka bam babehlala bezizigigaba nezingalunganga zala mantombazana esiNgesi ezikolweni zabo: Santa Clara kunye Torres de Malory.
Abo babini Ukuhlanganiswa kwazo zonke iikhosi kuyo nganye kuzo ngoku kukho iigugu ezincinci endizigcinayo ezishelfini zam. Ndiye ndaphinda ndabafunda sele bebadala kwaye ndisabathanda. Kwi-invoyisi ephindaphindwayo nangona abalinganiswa babo behlukile, la manqaku mabini, kubhalwe kwi-40s kunye ne-50s, Besele ziziiklasikhi kwezo zikude zikude ze-70 kunye nee-80s zakudala.
Ngoku kukho iintlelo ezintsha ngemifanekiso ethe kratya yobuntwana -okanye ngokuhambelana nexesha-, kodwa isiseko sihlala sinye. Nazi izihloko zazo:
Con amawele uPatricia (Pat) kunye no-Isabel O'Sullivan njengabalinganiswa abaphambili. Kwaye kwizikolo eziphakamileyo ezininzi ezitshintsha kuzo zonke iikhosi.
Amawele atshintsha izikolo
Amawele eSanta Clara
Unyaka wesibini eSanta Clara
UClaudina eSanta Clara
Ibanga lesihlanu eSanta
Con Imilambo iDarrell njengomphathi wayo ophambili.
Ikhosi yokuqala eTorres de Malory
Ibanga lesibini eMalory Towers
Kunyaka wesithathu eTorres de Malory
Ibanga lesine eMalory Towers
Ibanga lesihlanu eMalory Towers
Ikhosi yokugqibela eTorres de Malory
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Iincwadi » Iincwadi ezi-5 zokuqalisa isikolo kakuhle (okanye kakuhle)